के माओवादी विसर्जन भएको हो?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ८, २०७५ गंगा बीसी
काठमाडौँ — के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यसअघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? थिएन ।
नामचाहिँ माओको नामबाट राखिएको भए पनि त्यसका नेता नेपालीनै थिए। किन त? बन्दुकको बलले गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति माओकै थियो। त्यही नीति लिएकाले पूर्व एकता केन्द्रले माओवादी नाम राख्यो। युद्धकालमा माओको नाम गाँसिए पनि आफ्नो कुनै साइनो नभएको चीनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थियो। महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम माओवादी, मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिवाद, माओवाद थियो। माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवाद/विचारधारा भन्ने फुर्को पनि जोडिन पुग्यो।
माओको रणनीतिमा अंगालेर माओवादी १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्‍यो। त्यसको अर्को १५ वर्षपछि अर्थात् २५ वर्षपछि माओवादीले माओवाद परित्याग गर्‍यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले न्वारान गरेको माओवादलाई २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रुपान्तरण गरिदिए। एमाले र माओवादीको एकताबाट नेकपाको जन्म भयो। नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए। एमाले र माओवादीका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ नै हुन्।
२०२८ सालपछि बिभाजन भएका एमाले माओवादी ४७ वर्षपछि एउटै भए। यो बीचमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकै टुटफुट भए, एक दर्जनभन्दा बढी चिरामा कम्युनिस्ट बिभाजन भए। तत्कालिन मालेले चालिसको दशकमा माओविचार धारा छाडेको पाइन्छ। माओवादीले भने २०७५ जेठ ३ गतेसम्म अंगालिरह्यो। मार्क्सवाद, लेनिवादको विकसित रुप माओवाद भएको तत्कालिन माओवादीको निश्कर्ष थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवादलाई विज्ञानको रुपमा मान्दै आएका छन्। त्यसपछि हुने अरु वाद त्यसकै विकसित रुप भएको उनीहरुको बुझाइ छ। जस्तो: एमालेले मार्क्सवादको विकसित रुप लेनिववाद मान्छ भने माओवादीले मार्क्सवाद, लेनिनवादको विकसित रुप माओवाद मान्छ। ठिक यतिबेला दुबै पार्टीको बुझाइ के हो भने माक्र्सवाद विज्ञानको रुपमा लेनिनवादमा रुपान्तरण भएको छ। त्यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर समाजवादको बाटोमा जाने सहमति गरेका छन्। एमालेले मान्दै आएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद (माले) लाई दुबै दलले आगामी दिनको समाजवादी बाटो भनेका छन्।
बिगतमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमा मतभेद हुँदा धेरै पटक कम्युनिस्ट पार्टी बिभाजन भएका छन्। यसपटक भने माओवादी सहजै माओवाद त्याग्न तयार भयो। किन त? त्यसको कारण छ। माओवादको मुख्य सिद्धान्त सशस्त्र हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्नु हो। माओवादमै टेकेर माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गर्‍यो, २०६३ मा आएर त्यसलाई समाप्त गर्‍यो। सशस्त्र युद्धको बाटो त्याग गरिसकेपछि माओवादको पुच्छर समाइरहनु वैज्ञानिक थिएन। हालसम्म माओवादीले बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादलाई अंगालेको भए पनि त्यो सिद्धान्त त्याग्ने मौका पर्खेर बसेको थियो। एमाले र माओवादीको एकीकरणले माओवाद त्याग्ने मौका मात्र जुराएन, पार्टीको नामनै नेपाली पाराको राख्ने अवसर मिल्यो। माओवादी एमालेबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जन्म गराउन पाउँदा यसका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेता सन्तुष्ट हुनुपर्छ। किनकी अब विदेशी नेताको नाममा पार्टीको नाम राखेको आरोप लाग्ने छैन।
माओवाद त्यागेकोमा पूर्व माओवादीलाई पुछुतो छैन। माओवादका नाममा मोहन वैद्य ‘किरण’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले क्रान्तिका कुरा गरिरहने छन्। माओवादीले करीब १२ वर्ष अघि माओले अंगालेको सशस्त्र युद्धको बाटो त्यागिसकेको थियो। माओवादमै टेकेर माओवादीले ‘एक्काइसौ शताव्दीको जनवाद’ र प्रचण्ड पथ विकास गर्‍यो। उसले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डपथ छाडेको थियो। उसले पार्टी एकीकरणसँगै एक्काइसौ शताव्दीको जनवाद र तत्कालीन एमालेले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिमार्जन गरेको छ। दुबैले अब ‘जनताको जनवाद’ अंगाल्ने भएका छन्। जनताको जनवादलाई जनतन्त्र भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले जनवाद शव्द प्रिय भएको हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा अंगिकार गरिसकेको अवस्थामा जनवाद, जनतन्त्र, लोकतन्त्रको तात्विक फरक हुँदैन।
एमाले र माओवादी दुबै रुपान्तरण भएका हुन्, विर्सजन भएका होइनन्। माओवादी विर्सजन भएको हो, एमाले होइन भन्नुको तर्कमा दम छैन। किनकी पार्टी एकीरकण गर्न दुबैले केही बिषय त्याग गर्नै पर्ने हुन्छ। एमाले र माओवादीले पूर्ववत केही सिद्धान्त त्यागेर सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेका हुन्। दुई रङका नदी मिलेर अर्कै पानी देखिए जस्तै हो यी दुई पार्टी मिलन पछि बनेको सिद्धान्त। त्यसकारण यतिबेला विर्सजनको सवाल नभएर एकीकरण मुद्दा प्रमुख हुन आएको हो। अझै माओवाद अंगालेर मुलुकमा फेरि सशस्त्र हिंसात्मक युद्ध गर्नु छैन। त्यसकारण माओवादीले माओवाद त्यागेकैमा खुशी हुनु पर्ने होइन र?
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ १२:५८
जेष्ठ ५, २०७५ गंगा बीसी
काठमाडौँ — सबै मान्छेको आआफ्नो समय हुन्छ । समयसँग मान्छेको जीवन अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । समयको गति समान ढंगले बगेको हुन्छ, तर त्यही समय कसैका लागि अनुकूल र कसैका लागि प्रतिकूल भइदिन्छ । अनुकूल समयको मान्छेले खास याद गर्दैन, जब प्रतिकूल समय हुन्छ, मान्छे रन्थनिन्छ, सामना गर्छ ।
त्यसबेला कुनै न कुनै रूपमा सुस्केरा निस्कन्छन् । लेख्नेहरूले ती सुस्केरा लेखेर राख्छन्, कसैका ती सुस्केरा हावामा उडेर जान्छन् । भोग्दा कठिन भएको समय सम्झनामा भने सुन्दर हुन सक्छ । शारदा शर्माको ‘त्यो समय’ धेरै पुरानो काल होइन । उनको करिब एक दशकअघिको उनको त्यो समय एकनासको छैन । सोचेभन्दा फरक । कल्पना गरेभन्दा कठिन । कहिलकाहीँ एक्लो पनि भइदिन्छ त्यो समय, कहिले दु:खपछि सुख भएर आउँछ । परिबन्दले रुनु, रमाउनु, कराउनु, हाँस्नुपर्ने बनाइदिएको छ । ‘त्यो समय’ को केन्द्रविन्दुमा उनी आफैं छिन् । अरू पात्रहरू वरिपरि घुमेका छन् । उनको वरिपरि नजिकका नातेदार र उनको काम गर्ने थलो, घुमेका ठाउँ जोडिएका छन् । कामको सिलसिलामा देश–परदेशको यात्रा जोडिने नै भयो । यात्रामा भेटिने ठाउँ, पात्र, परिवेश र प्रवृत्तिहरू लेखकका मुख्य सामग्री हुन् ।
शारदा शर्माको परिवारको आधा हिस्सा राजनीतिमा छ । त्यसकारण पनि उनको ‘त्यो समय’ मा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्नु अन्यथा मान्न सकिँदैन । राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि उत्पन्न परिस्थितिले उनको घरपरिवारका साथै मनस्थिति नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । उनले त्यस बेला बेपत्ता परिवारको पीडा भोगेकी छन् । माओवादीको १० वर्षे युद्धकालमा बेपत्ता भएका परिवारले हालसम्म भोगेजस्तै पीडा उतारेकी छन् । लेखकको घरमा राजनीति मजाले भिजेको छ, खासगरी उनका पति नरहरि आचार्य पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ भएकाले उनी त्यसबाट भाग्न सक्ने ठाउँ नै रहेन । राजनीतिज्ञको परिवार अरूभन्दा फरक हुन्छ । राजनीतिज्ञले सोचे, भोगे र भनेभन्दा अझै ठूलो समयको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछिको परिस्थितिको बयान लेखकको काँडाघारीको यात्रा थियो । त्यो कुरा राम्ररी ‘त्यो समय’ मा भेटाउन सकिन्छ ।
अरूभन्दा बढी रोचक पक्ष के भने तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मनोविज्ञान यसमा छ । राजाले शासन लिएर उपचारका नाममा कोइराला भारतको नयाँ दिल्ली गएको बेला लेखकसँग भएको भेटले राम्रै स्थान पाएको छ । लेखक आफैंले खुलेरै लेखेपछि पत्याउन गाह्रो छैन । हुन त विराटनगरका कोइराला परिवार अरूभन्दा खुला र उदार हुन् । उनै कोइरालाको प्रतिविम्ब लेखकमाथि परेको हुनुपर्छ । शाही सरकारबाट नरहरि आचार्य जेल परेको बेला शारदाले दिल्लीमा कोइरालासँग भेटेको प्रसंग छ । शाही सरकारको जेलमा रहेका पतिलाई रिहा गर्ने चासोसाथ लेखक कोइरालालाई भेट्न पुग्छिन् । कोइरालाले लेखकलाई कुनै बच्चाझैं माया गर्छन््, अंगालो हाल्छन् । उनले त्यो प्रसंग उल्लेख गरेकी छन् । ‘उहाँ (कोइराला) ले सोध्नुभयो— लौ भन्नुहोस्, के गर्नुपर्छ मैले ? के चाहिएको छ ? मेरो हात कपाल सुम्सुम्याइरहनुभएको थियो बिस्तारै । उहाँको यो व्यवहार बडो अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई । मभन्दा ३५ वर्ष जेठो हुुनुहुन्थ्यो बयोवृद्ध पुरुष । मलाई त मन परेन । प्रतिवाद गर्न सकिनँ, बडो अल्मलिइरहे ।’ कोइरालाले त्यतिबेला भनेको अर्को प्रसंग पनि त्यहाँ छ, ‘ज्यादै धेरै, म कति माया गर्छु भन्ने थाहै छैन तपाईंलाई ।’ अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला छैनन् । उनी जीवित भएको भए कस्तो मानेर यो प्रसंग पढ्ने थिए होलान् ?
कोइरालाले आफू निकट मान्छेहरूको दु:ख बुझेर आर्थिक सहयोग गरेको प्रसंग चल्थ्यो त्यतिबेला । दिल्लीमा कोइरालाले आकर्षक जागिर खाइरहेकी लेखकलाई पनि भारु बीस हजार ‘सहयोग’ दिएका रहेछन् । कोइरालाले पटकपटक के सहयोग गर्न सक्छु भनेपछि लेखकले प्रस्ताव अघि सार्छिन्, ‘हजुरले नरहरिजीलाई राजनीतिमा संरक्षण दिनुपर्छ । ऊ असल मान्छे हो, पार्टी सुधार्छु, देश बनाउँछु भन्छ— यी कुरामा हजुरलाई सहयोग गर्ने मान्छे हो ऊ, मैले भनें ।’ त्यतिबेला कोइरालाले ‘त्यो म गर्छु’ भने पनि दुई नेताबीच राम्रो सम्बन्ध कहिलै भएन ।
‘कोइराला भनेको कांग्रेस र कांग्रेस भनेको कोइराला’ अवस्थामा लेखकका पति नरहरि आचार्यले पार्टी महाधिवेशनमा कोइरालालाई चुनौती दिएका थिए । तर, कोइराला शारदालाई कतिपय भित्री कुरा भेटमा भनिरहन्थे । अर्को एउटा त्यस्तो प्रसंग छ । आफ्नो स्वास्थ्य र राजनीतिक उपचारका क्रममा दिल्लीमा उनले भने, ‘मैले यसपालि कहिलै अनुभव नगरेको एल्लोपन अनुभव गरें । लाग्यो— सबै आआफ्नो स्वार्थका निम्ति मलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । एक्लो पो रहेछु म पूरै । आफ्नो पार्टीका, वरिपरिका मान्छेको व्यवहारबाट बडो दु:खी भए यसपालि । सायद त्यसैले बिरामीबाट तङ्ग्रिन सकिनँ ।’
कोइरालाको दिल्ली दौडाहामा माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीले मुलुक गणतन्त्रउन्मुख भएको थियो । लेखकले आफ्नो सम्झना त्यस्ता केही प्रसंग उल्लेख गरेकी छन् ।
२०६१ माघ १९ मा नेपालमा तत्कालीन राजाले ‘प्रजातन्त्र हरण’ गरेको दिन हो । नरहरि आचार्य (जसलाई लेखक ‘बाबा’ सम्बोधन गर्छिन्) लाई शाही सरकारले पक्राउ गरी हिरासतमा लगेको थियो । आफन्त बेखबर थिए । दिल्लीबाट फर्केपछि बाबाको खोजीमा लेखक भौंतारिएको अनुभव मन छुने खालको छ । माओवादी युद्धमा बेपत्ता परिवारले भोगेको पीडासँग केही हदसम्म मिल्छ यो घटना । दिल्लीबाट फर्केपछि उनको घर मात्र होइन, मन पनि उदास थियो । ‘लागेको थियो— तिमीसँग (नरहरि आचार्य) भेट्न नपाए पनि घर आउनु भनेको आफैंमा सान्त्वना हुनेछ । होइन रहेछ, झन्झन् पोलिरहेछ मन, दन्किरहेछ आगो ।’ राजधानीका सुरक्षा निकायमा चहारेपछि उनले बाबालाई ककनी सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा भेटिन् । उनका बाबा त्यहाँ भएको थाहा पाएपछि उनी खुसी नहुने कुरै थिएन । ‘आफ्नो मान्छे थुनिएको थाहा पाएपछि त झन् फर्कन मन लागेन मलाई । आखिर घर भनेको के हो र ? आफन्त जहाँ छन्, त्यही त हो घर ।’ बन्दी प्रसंग दुवाकोटबाट आचार्य नछुटेसम्म आइरन्छ । अरू कांग्रेस नेताहरू अदालतमा रिट हालेर भकाभक छुटेका बेला नरहरि भने सबभन्दा पछि छुटे ।
शारदाको ‘त्यो समय’ लाई आधा राजनीति र आधा निजात्मक संस्मरण भने पनि फरक पर्दैन । अर्को पाटो उनको जागिर, छोरीहरू, आफन्त र सहकर्मीहरूको संगत, उठबस, मायाप्रेम, रिस राग पनि झल्किन्छ । राजाको कदमपछि नरहरि जेलबाट नछुटेसम्म, पहिलो संविधावनसभा निर्वाचन, चुनावी प्रचार, विजय उत्सवलगायतका विषयमा उनी राजनीतिमा होमिएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि उनले राजनीतिमा देखिएका विभिन्न प्रवृत्तिहरू निजात्मक ढंगले राखेकी छन् । राजनीतिक प्रसंगमा उनी इमानदार देखिन्छन् । उनीमा कुनै पूर्वाग्रह देखिँदैन । कतिपय विषयमा उनी नरहरिभन्दा फरक धारमा उभिन्छिन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा नगर्न उनले सुझाव दिए पनि नरहरिले मानेका रहेनछन् । शाही शासन, १९ दिने जनआन्दोलन, माओवादी सरकार वार्ताका विषय सरसर्ती व्याख्या उनले गरेकी छन् । केन्द्रमा नरहरिजीलाई राखेर लेखेका दैनिकीमा उनले कतिपय स्थानमा पाठकका लागि चासो नहुने विषय हालेकी छन् । खासमा संस्मरण लेखन यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन । राजनीतिमा उनको ज्ञान र प्रस्तुति सतहीजस्तो छ । गहिराइमा पुग्ने चेष्टा गरेकी छैनन्, सायद आवश्यक ठानिनन् कि ।
नरहरिलाई शारदाले यति धेरै माया गर्छिन् । लोग्ने–स्वास्नीबीच गुनासा नहुने कुरै भएन । ‘यही मान्छेसँग तीस वर्ष सँगै बस्ता मलाई कति गाह्रो भयो होला— ऊ मलाई पनि देख्तैनथ्यो, अझै कतिपय अवस्थामा । सँगै हिँड्यो मलाई पछाडि छाडेर कहाँ पुग्छ । म क्षमा गर्छु सजिलै उसलाई, मतदाताले गर्दैनथें नि ।’ पहिलो संविधानसभाको प्रसंग हो यो ।
आमा र दुई छोरीबीचका संवाद रमाइला छन् । उनका दुवै छोरीले अस्ट्रेलियाबाट उच्च शिक्षा लिए पनि नेपालमा जागिरका लागि दौडधुप गरेका छन् । छोरीको प्रेम प्रसंगलाई रमाइलो ढंगले उनले उतारेकी छन् । सन्तानको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिएर उनीहरूलाई मार्गनिदेर्शन गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष झल्किन्छ । कतिपय मसिना सन्दर्भले शब्दको बोझ मात्र दिएको छ पुस्तकलाई । जस्तो एउटा वाक्य— अनामिकाले नीलो जिनको पाइन्ट, गुलाफी रङको हाइनेक स्वेटर र गलबन्दी लगाएकी थिई ।
जागिरको सिलसिलामा लेखक यौनकर्मीको अधिकारका लागि भारतको कलकत्ताको सोनागाछी रेड एरिया पुगेपछि अनुभूति मार्मिक रूपमा चित्रण गरिएको छ । ‘सोनागाछीका गल्लीमा घुमेर फर्कंदाको मेरो मनस्थितिले भने म बयान गर्न असमर्थ छु । बाटैमा सोचिहरेथें— रेडलाइट एरियाको गल्लीमा घुमिरहेका ती पुरुष र सडकमा हिँडिरहेका यी पुरुषमा के भिन्नता छ ? भद्दा शृंगार र अल्प पोसाकमा अनेक हाउभाउ गर्दै ग्राहकलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयत्नमा लागेका यी मायालाग्दा स्वास्नीमान्छे र म आफैंमा के भिन्नता छ ?’ मानवता एउटै हो । जो जहाँ रहे पनि । मानवीय संवेदनाका कुरा हुन् यी । यही प्रसंगमा नेपाली यौनकर्मीले भनेको अर्को प्रसंग छ । ‘हामी यहाँ बजारमा नबस्ता हौं त तिमीहरू भलाद्मी र असल बनेर कहाँ निर्धक्क हिँड्न पाउँथ्यौ ? सडकमै दिउँसै बलात्कार गर्थे यी पुरुषले तिमीहरूलाई । घरका पत्नी तिमी, बजारका पत्नी हामी... तिमी पट्टी बाँधिएका कुकुर, हामी पट्टी नबाँधिएका कुकुर... तिमी र हामीमा यत्ति नै हो फरक... ।’ प्रवासको जागिर, अन्धकारमा नेपाल, फेरि काठमाडौंमा, घरमा चोरी, छोरीहरूसँग सिड्नीमा, दिल्लीमा गिरिजाप्रसाद, उन्नाइसदिने जनआन्दोलन, संविधानसभाको चुनाव, भुटानकी रानी र जागिरबाट राजीनामा शीर्षकहरू समेटिइएका छन् । शीर्षकमा उल्लेख भएभन्दा फरक विषयवस्तु त्यहाँ छन् ।
‘त्यो समय’ मा पाठकका लागि धेरै खुराक छन् । लेखकले चतुर ढंगले राजनीति, माया प्रेम, यौन, पीडा, आक्रोश, संघर्ष, मिलन–विछोड, मायामोह आदि विषय मिसमास गरेकी छन् । उनले आफ्नै घरपरिवार, साथी, कार्यालयको कुरा गरे पनि त्यसमा पाठकका लागि रुचिकर मसला पस्केकी छन् । लेखकको सबभन्दा ठूलो विशेषता नै उनी जहाँ पुग्छिन्, त्यहाको वस्तुस्थितिलाई अक्षरले चित्र उतार्छिन् । नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि पाठकका लागि सामग्री बनाउँछिन् । लेखनमा ‘परिवारवाद’ लाई प्रमुखताका साथ राखेकी छन् । लेखकले यो कृतिलाई ‘एउटा समयको अभिलेख’ भनेकी छन् । यसमा कम अभिलेख र बढी अनुभूति छन् । भाषामा सरल छ, बगेको छ । ‘त्यो समय’ पढ्दा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था खासै छैन । धन्य त्यो समय जसले जसले लेखकलाई राम्ररी खेलायो अनि यो संस्मरणात्मक कृति जन्मायो ।